Lamaane £9,000 oo Ganaax ah ku Muteystay Qaylada Ka Baxaysa Marka ay isu Tagayaan – fogaanarag
Lamaane Talyaani ah ayaa lagu ganaaxay in ay bixiyaan £9,000 oo ganni kadib markii lagu helay dacwad ay ka gudbiyeen dariskooda oo ah qaylo iyo guryan saa,id ah oo ay sameeyaan marka ay isu tagayaan ama isu galmoonayaan.
Dariska lamaanahaasi ayaa ka sheegtay in qaylada lamaanahaasi ay ku qasabto in ay ka guuraan gurigooda marka ay u dulqaadan waayeen qayladooda oo dareen ahaana kicinaysa qofkii maqla.
Sida ay qortay Daily Mail lamaanahaasi oo da’ahaan ku jira sodomeeyo kuna dhaqan magaalada ku taalla waqooyiga Talyaaniga ee San Martino ayaa lagu helay dambi ah qaylo badan oo anshaxa ka baxsan oo ka soo yeerta gurigooda marka ay isu galmoonayaan.
Dariska ka qayladaasi ugu qaxay gurigooda ayaa muddo badan ku dhibanaa kana dacwoonayay dhaqankooda waxaana markii ugu horeysay ay maxkamada geeyeen dacwadooda 2009 kii iyagoo cadeeyay in iyaga iyo ilmoodba aysan seexan habeenkii qaylada ka yeeraysa lamaanahaas owgeed.
Odayga lamaanaha lagu helay dambiga oo aanan la magacaabin ayaa hore loogu xukumay afar sano oo xabsi ah 2011 halka haweenaydana lagu amrey in ay joojiso ama yareyso qaylada ay samaynayso xiliga galmada.
Waxaa ay ka qaateen ambiil hase ahaatee hadda ayaa lagu riday xukunka kama dambeynta oo ah in ay bixiyaan £7,000 oo ganni oo ah waxyeelada ay u gaysteen dariskooda oo gabi ahaanba ay ku qasbeen in ay ka guuraan gurigii hore hadana degan meel kale, sidoo kale £2,000 oo ganni lacagtii maxkamadda ah ayaa laga qaaday oo ganaaxooda ka dhigaysa £9,000 oo ganni.
Halkaan ka daawo Lamaane kale oo Ingiriis ah oo iyana ay qabsatay isla Arintaan oo illaa heer xabsi ku muteystay